Suugaanta | Somaliland Voice
14th September 2018 By Somaliland Voice
Maansadani waa mid xambaarsan fariin aad u qaaliya. Waa maanso farshannimo heer sare ahi ku dheehan tahay.
Filed Under: Suugaanta
Maansadani lamagac baxday Dirsooc waxa curiyay Abwaan Ibrahim Gadhle, waa mid xambaarsan fariin aad u qaaliya. Waa maanso farshannimo heer sare ahi ku dheehan tahay.
4th May 2018 By Somaliland Voice
ABWAN CISMAAN FAARAX XARIIR IYO GABAY LAYAAB LEH OO UU KA TIRIYAY QISO JACAYL AH OO INAN DHEX MARTAY.
Abwan Xariir Cismaan Faarax oo Gabay cusub ku karbashay wasiirkii hablaha cayay ee Guri-Barwaaqo.
Abwaan Xasan Daahir (Weedhsame) Oo Gabay Cajiib Ah Hogaaminta Madaxwayne Muuse Biixi Ka Tiriyay.
3rd May 2018 By Somaliland Voice
HIDDIIDIIYOOY HIDII, Waa Hees Garnaqsi Ah Waxa Sameeyay AHUN Abwaan CALI SUGULLE (1962).
6th October 2017 By Somaliland Voice
Waa haben madaw oo mugdiya, oo cirkuna hadoodilan yahay, waa dhaxan, wadooyinkuna waa juuqla jaaqla , askari waardiye ah uun baa lugeynaaya.
Axmed guriguusu wuxuu ku yaalaa koonaha magaalada, wuu dhaxamoonayaa, koofiyaddii uu gashanaana waxba kama tarayso, kolba wuu yara kacayaa, si uu dhaxanta isaga duuliyo, markuu daalona wuxuu ku yara dhakinaayey makhsinta uu seexdo ee u dhaw daaqadda debbeda, saacaddu xiliga ay marayso lama socdo, laakiin waa goor danbe.
Albaabkii guriga ayaa la garaacey, waxa uu iswaydiiyay tolow xiligan yaa garaacaaya! cidina reerka kama maqnee oo way wada hurdaane.
XAAJI AXMED: xaggii albaabka ayuu u Kacey, waxaanuu yidhi, waar wa ayo?
QOFKII ayaa jawaabey, waa aniga QAWDHAN DHULCUN ?
XAAJI AXMED: tolow maxaa soo kordhey ayuu iswaydiiyey?
XAAJI AXMED: albaabkii ayuu ka furey; soo dhaaf ayuu ku yidhi, wuxuu geeyey makhsinkiisii uu jiifey, kursi halkan yaalla ayuu isku tuurey QAWDHAN, boodh ayaa ka duuley, waayo? QAWDHAN wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qarowayn oo balaadhan.
Maxaa soo kordhay ,ayuu Xaaji Axmed waydiiyey QAWDHAN? Adeer waxba ma soo kordhine, ha werwerin, ee bal adigu iska waran? Xaalkaagu waa sidee?
Xaaji Axmed inta uu dib u fadhiistey, oo cirka eegey, oo waxoogaa yar oo murugo ahi codkiisa ka muuqatey, ayuu ku jawaabey: waa nin iyo waagii? Inkastoo waayuhu adag yahay? maxaan ka waramaa, xaaskii way iga bugtaa oo dawo uma soo iibin karo, islaantii ii Hooyada ahaydna waa sakaraad, caruurtiina Allaa xaalkooda og?
QAWDHAN DHULCUN: Illaahey ha ku caawiyo, isdeji, dadkuba wax badan isma dhaamee, waad ogtahey duruufaha dalka iyo dadkaba heysta ee aynu ku nool nahey, sidaa awgeed ayaan kuugu imi, waan ogahey inaad aad lacag u baahan tahay, aniguna raali ka ahaan maayo inaad xaaladdan xun ku sii jirto , oo sidaa kugu eegan kari mayo.
Xaaji Axmed: wax badan ayaa madaxiisa ku soo dhacey, su’aalo badan ayuu iswaydiiyey, tolow maxaa keeney Qawdhan? tolow muxuu u jeedaa? tolow muxuu iga doonayaa? tolow maxaa buul caws keygan uu ka soo doonay? tolow muxuu ii caawinayaa? iyo su’aalo kale oo jawaabo u baahan ayuu Qawdhan Dhulcun ka sugayaa?
Qawdhan Dhulcun: ayaa yidhi, Xaji Axmedaw ma ga raneysaa dhulkii yaraa ee beerta gurigeyga ku xigtey, ayaa Xaaji Sakariye sheeganayaa inuu Aabbahey ka iibsadey intaanu dhiman ka hor, laakiin wax waraaqo ah ma heysto oo cadeynaaya arintaa?
Xaaji Axmed ayaa si adag arintii uga jawaabey, oo ku yidhi, Qawdhanaw waxa jirtey shuhuud badan oo arintaa ka markhaati aheyd, oo taagneyd markii ay lacagta kala qaadanayeen, oo aan anigu ka mid ahaa .
Qawdhan: Xaaji Axmed iska ilaw shuhuudaa la soo kiraystey iyo markhaati nimadooda?
Xaaji Axmed: Qawdhanaw maxaad iga dooneysaa aniga iminka?
Xaaji Axmed waxa madaxiisa ka guuxay say sidii uu lacagb u siin lahaa Qawdhan uun, Qawdhanna intuu farxay oo uu arkey inuu marsiiyey Xaaji Axmed, in uu iska ilaawo ciddii laheyd dhulka, oo uu ku qanco in lahaan shiiyaha dhulku uu yahay dhulkii Aabbiohii, inkastuu ogyahay Xaaji Axmed runta, laakiin saacadani waa saacad uu sheydaanku shaqaysanaayo, oo qofka caqligiisu iyo maankiisuba ay maqan yihiin. Baahidoo ka badatey awgeed.
Qawdhan Dhulcun: Xaaji Axmed ma ku qanacsan tahay iminka inuu Aabbahay dhulka iska lahaa? oo aanu xaajigan sheeganayaa lahayn? ninkana Maxkamadda ayuu tegey si uu xaqan uu sheeganaayo u soo ceshedo? Maxkamaduna berito 10:00 subaxnimo weeye, sidaa daraadeed waxa weeye, inaad ii raacdo Maxkamadda oo ka hor caddeyso inuu Aabbahey dhulkan laha , oo aanu ninkana ka iibin, shaqona aanu dhulkan ku laheyn.
Xaaji Axmed: LAAKIIN Qawdhanaw Adeer……
Qawdhan: Arintan ha ka fekerin, wakhti ma haysano, aidigaan isku kaa haleynayaa, si aan xaqeygii u soo ceshedo.
Qawdhan Dhulcun: ayaa jeebkiisa, wuxuu ka soo saaray lacag Dollar ah oo aad u badan, miiska ganbadhka ayuu u saarey Xaaji Axmed, wuxuuna ku yidhi: lacagtan yarna waa mid aynu isku leenahay ee reerka wax ugu soo iibi, beritona Maxkamadda ka bacdi kharash fiican baan ku siinayaa. Waa inoo iyo berito ?
Xaaji Axmed ayaa is yidhi, u mahadnaq Qawdhan: waad! Laakiin Qawdhan kamuu sugine wuu ka jarey hadalkii. Weynu usku leenahay ayuu ugu jawaabey: waa inoo iyo berito 09:00 subaxnimo gurigaaga hortiisa ayaan kugu soo marayaa, anigoo gaadhaga wata!
Xaaji Axmed: dee wax cab
Qawdhan dhulcun: waad mahadsan tahay xaaji .
Qawdhan wuu iska baxay, Xaaji Axmed werwer iyo dhaka faar ayaa isugu yimi. Markhaati beena – lacag uu u baahan yahay oo soo doonatey, muxuu yeelaa?
Ma been buu sheegaa oo lacagtuu qaataa?
Mise runtuu sheegaa oo wuu ku lacag beelaa?
Muxuu yeelaa, talaa ku cadaatey?
Xaaskiisii way bugtaa, Hooyadii waa sakaraad, caruurtiisii aad iyo aad bay u baahan yihiin.
Xaaji Axmed waa nin illaah , oo dhaqan muslim leh, laakiin nin aad u adag maaha, dhibaatooyinkana uma adkeysan karo, cimrigiisuna waa ilaa 33 jir.
Xaaji Axmed werwer ayaa nafta isugu keeney, habeenkii oodhan laba indhood isumuu keenin, waagii baa baryey, wuu diyaar garoobey, wuu soo fooldhaqdey, dharkiisii buu gashadey, ALBAAB KAABA lagaraacey , qawdhan baaba yeedhaaya .
Xaaji Axmedaw diyaar ma tahey?
Haa waa nigan soo baxaaya.
Xaaji Axmed gaadhigii ayuu korey, xaggii Maxkamadda ayey afka saareen, Xaaji Axmed markii uu gaadhiga ka degey, ayaa naxdin, iyo baqasho – gariir – ku bilaabmey ..
Qaadigii ayaa markhaatiyadii u yeedhey, markii uu doorkii Xaaji Axmed la soo gaadhey ee uu Qaadigii is hortaagey, ayaa dhidid waaweyni qariyey wejigiisii, wadnuhuna gariirey,
XAAJI AXMED: Xaaji Axmed Cabdilaahi
QADIGII: IMISAAD JIRTEY?
XAAJI AXMED: 33 SANO
QAADIGII: Maxaad ka shaqeysaa?
XAAJI AXMED: Waan shaqo la ahay iminka …
QAADIGII: Waayahey Axmedaw kitaabkaa Quraanka ah gacantaada saar:
QAADIGII: Waxaanad iga daba tidhaahdaa (Walaahay Bilaahay Tallaahay runta ayaan ka sheegayaa arintan )
XAAJI AXMED: Markaasu Xaaji Axmed gariirey : wuxuu xasuustey Aakhiro -Naarta -Janada- Cadaabta Ililaahey – Ciqaabta Aakhiro – markaasuu intuu Qaadigii ishortaagey yidhi
Wallaahey Billaahey Tallaahey runta ayaan arintan ka sheegayaa , iyo sidii Illaahay igu ogaa …
Xaaji Axmed runtii ayuu shegey, dadkii meesha joogey oo dhammina way u sacab tumeen.
Qaadigiina wuu xukumey qadyaddii.
2nd October 2017 By Somaliland Voice
3-QAWLAYSATO: Waxaa jirta mid kale, oo taa kaduwan ,oo markii ay dhibtay budhcada guur guurtaa ,ay samaysteen gobolada qaarkood ,oo iyana aan waxba u qaban,dadka shicibka ah ,laakiin waxay ka celiyaan oo qudhi waxay tahay ,in debeda lagaga soo duulo,qawlaysatadan oo hamigeeda ugu wayni yahay sidii ay lacag u urursan lahayd,hantina debedaha u dhigan lahayd,feker kooduna wuxuu ku kooban yahay oo qudha intaa ay joogaan.
QAYBTA DANBE LA SOCO.
nadaamka jujuubka ah iyo kaligii talinimada.
Waad salaamantihiin… akhristayaal tanu waa qaybtii sadexaad. taxanihii dawladuhu siday dunida ku abuurmeen. Qaybtii hore waxaynu joognay, qawlaysatadu maxay ahayd?
Aragtida jujuubka ama qawlaysatanimadu waxa layidhaahdaa ,dawladdu waxay ka dhalataa jujuub iyo awood (muquunis) ay adeegsato koox xoog lihi,si ay danteeda gaarka ah ugu gaadho,qaar ka tamaryar,hareeraheedana waxay ka abuurtaa kooxo budhca ah(sida budhcad badeeda reer garoowe oo kale)oo ay ku adeegtaan,maamulka (garoowe iyo boosaaso).
Waxaanay qawlaysatadu hareeraheeda ka abuurtaa ,budhcad yaryar oo aan degenayn,si ay ugu dhuumato ,oo aan iyaga loo xisaabin,waxay samay nayaana loo arag,oo loo yidhaahdo kuwan ayaa dhaama ,kuwaa.
Aragtidani waxay xukuumadu u aragtaa,inay wakiil u tahay,koox ama dabaqad bulshada ka mid ah,shaqadeeduna tahay inay dakhli ka dhacdo bulshada ku hoos nool intooda badan.
Dawlad la aantuna waxay keentaa,inay abuurmaan kooxo budhcad wareegta ah, oo tartan ugu jira dhaca iyo xaditaanka,ciday arkaana dhaca oo booba.
Falalkaasina waxay bulshada ka dilaan ,himiladii iyo rajadii bulshadu ka qabtay mustaqbalka, iyo in ay bulshadu dalka maal gashi ku samayso,iyo waxsoosaar iyo waxqabsi.
Waayo ?majirto cid ku daalaysa beeridda midho ay og yihiin ,in cid kale goosanayso.
Sida la ogyahay budhcadda guurguurtaa waxaa dantoodu ku jirtaa inay ,dhacaan -boobaan-xadaan,waxa ugu badan ee ay qaadan karaan,dabadeedna ay baxsadaan,wixii aman doonana kama fekeraan.
Laakiin tartanka u dhexeeya budhcada waxa ka abuurma,in midkood istuso inay u faa iido badan tahay xakamaynta tartanta (taasuna weli kamay dhicin soomaaliyada koonfureed ,oo weli kooxuhu may kala adkaan,oo way isla daalaa dhacayaan…wakhti dheer baana weli u xadhay,inay koox qudhi ku adkaato.)
Wuxuuna u hawl galaa sidii uu ku baabi in lahaa budhcadda kale,isaga oo qudhina u uu bulshada ugu hadhi lahaa. Dabadeed wuxuu noqdaa budhcad deggan. Wuxuuna dagaal ku qaadaa budhcadda kale(sida maanta ka taagan koonfurta soomaliya).dadkii ay dhici jireena wuxuu ka dhigaa RACIYAD(shacib)magan u ah. sidaasna wuxuu ku noqdaa KELIGIITALIYE.
CALIWWELLI cali maxamed biixi